Soo-saarista dhijitaalka ah iyo teknoolojiyada cusub ee lagu qaabeeyo alaabada | Abuurista khadka tooska ah
Pablo Gonder | | Dhiirrigelinta, dhowr
Soosaarka dhijitaalka ah iyo teknoolojiyada cusub si loo naqshadeeyo alaabada dhammaan noocyada. Nidaamyada waxsoosaarka ayaa isbeddelay siinta abuurayaasha fursadaha cusub ee wax soo saarka. Teknolojiyada sida Daabacaadda 3D waa inay helaan injineero, farshaxanno, nashqadeeyayaal iyo abuurayaasha nooc kasta oo ay awoodaan abuuro soo jeedin jireed waqtiga diiwaangelinta iyo qiimo aad u jaban iyada oo aan loo baahnayn in loo maro warshadaha si loo soo saaro noocyo.
Isbeddelada adduunka, horumarka tikniyoolajiyadda iyo hal-abuurnimaduba waxay ku biirayaan nidaamkan si ay u siiso natiijooyin u gaar ah labada abuurayaasha iyo adeegsadayaasha doonaya alaabooyinka lagu soo saaray tiknoolajiyadda noocan ah.
1 Teknolojiyada daabacaadda ee 3D
2 Waa maxay fursadaha uu daabacaadda 3D leeyahay?
3 Maxay yihiin isticmaalka wax soo saarka dhijitaalka ah haddii aan ahay naqshadeeye wax soo saar?
4 Wax soosaarka dhijitaalka ah ma ka cagaaran yahay?
5 Xoogga biyaha
6 Jarida laser
7 Elena Corchero: naqshadeeye ku takhasusay sameynta dijitaalka
Teknolojiyada daabacaadda ee 3D
La Daabacaadda 3D waxay ku guuleysatay inay abuurto a nidaam cusub oo wax soo saar dijitaal ah aad u soo jiidasho leh xirfadlaha iyo adeegsadaha helaya qof aan ku aqoon tikniyoolajiyadan. Nidaamkan waxsoosaarka dhijitaalka ah wuxuu isticmaalaa xarig caag ah sida daabacaadda. Ku saleysan a tikniyoolajiyadda xakamaynta tirada, Daabacaadda 3D ayaa guuleysata u tarjun xogta tirooyinka dhaqaaq ku guuleysiga sidan oo kale abuur qaababka jirka ee saddex cabbir ah.
Waa maxay fursadaha uu daabacaadda 3D leeyahay?
Marka laga eego dhinaca farsamada fursadaha nidaamka daabacaadan ayaa laga arki karaa dhinacyo kala duwanka Medicina up dhismaha waan arki karnaa sida qaybaha ka baxsan naqshadeynta iyo farshaxanka ay u adeegsadaan nidaamkan sida qalab hal-abuurnimo. Waxaan ka heli karnaa daabacaadda 3D qaybta caafimaadka ee mashaariicda sida xiisaha leh sida isticmaalka unugyada asliga ah iyada oo loo marayo nidaamka daabacaadda abuurista xubnaha aadanaha.
Haddii aad jeceshahay cuntada, waxaad xiisayn doontaa inaad ogaato inay jirto cuntada lagu abuuray iyadoo la adeegsanayo daabacaadda 3D.
Maxay yihiin isticmaalka wax soo saarka dhijitaalka ah haddii aan ahay naqshadeeye wax soo saar?
La wax soo saarka dhijitaalka ahwuu furay adduunyo fursado u leh naqshadeeyayaasha warshadaha iyo wax soo saarka maxaa yeelay waxay bixiyaan suurtagalnimada Abuur noocyo qiimo aad u jaban ah ka fogaanshaha in loo maro habsocodyada wax soo saarka warshadaha. Haddii aad tahay naqshadeeye wax soo saar waad awoodaa Naqshad qayb ka mid ah alaabta guriga ku samaysa 3D oo ku samee meel kasta oo adduunka ah, tani shaki la'aan waa horumar dhanka saadka, dhaqaalaha iyo bay'ada ah, mahadi ha ka gaadho soosaarka dhijitaalka ah waxaad awoodi doontaa inaad haysato dhamaanba alaabadaas aad jeceshahay oo aad uga dhakhso badan kana jaban. Maanta internetka waxaad ka heli kartaa bogag badan oo aad ka bixin karto alaab guri oo bilaash ah in lagu soo saaro iyadoo la adeegsanayo nidaamyadan wax soo saar.
Wax soosaarka dhijitaalka ah ma ka cagaaran yahay?
Waxsoosaarka dijitaalka ayaa sidaas ku guuleysta wax soo saar loogu talagalay meel kasta oo adduunka ah waa suurtogal in la soo saaro iyada oo aan loo baahnayn nooc kasta oo gaadiid ah iyo kharashyada ka soo baxa hawshan. Si loo simo deegaanka soosaarka dhijitaalka ahi wuxuu ahaa horumar. Nidaamkan cusub ee wax soo saarka dhijitaalka ahWuxuu ka soo horjeedaa duugow qorsheysan la dagaallanka fikradda ah in la tuuro shay markii uu waayo qayb ka mid ah gabalkeeda. Iyadoo loo marayo qaabeynta 3D waa suurtagal nashqadeyso qayb kasta oo walxaha ka mid ah waxyeello oo beddel sidaasna ku siinaya nolol cusub.
Miyaad rumaysan lahayd taas diyaarad biyo ah ayaa dhex jari karta birta? Rumayso maxaa yeelay waad samayn kartaa si fududna. Waxaa jira nooc ka mid ah Mashiinka xakamaynta lambar ee loo yaqaan "jet biyo" maxaa gooyay biraha ilaa dhagaxa dhib la'aan. Ku saabsan yahay tiknoolajiyad la mid ah sida 3D loo daabaco laakiin halkii laga heli lahaa nidaam wax ku daraya, waxa ay leedahay waa diyaarad biyood xoog leh.
Dhamaanteen waan wada xasuusanaa goobtii dagaaladii xidigta markay Jedi albaabada ku jareen seeftooda laser iyadoo aan dhib laga qabin, in kastoo tani u muuqato mid waali ah waa suurtagal in lagu mahadiyo mashiinada goynta leysarka. Tiknoolajiyadda noocan ahi waxay la mid tahay 3D laakiin wuxuu adeegsadaa leesar si uu u jaro dhammaan noocyada qalabka waxay kuxirantahay awoodeeda. Suuqa waxaan ka heli karnaa badeecooyin badan oo lagu sameeyay nidaamkan goynta meesha soo jiidashadeeda ugu weyni waa dhammaadkeeda, geesaha alwaaxda waa la gubay, sidaas awgeed lagu gaarayo muuqaal muuqaal leh oo xoog leh.
Elena Corchero: naqshadeeye ku takhasusay sameynta dijitaalka
Adduunyada ikhtiraaca wax soo saarka dhijitaalka ah waxaan ka heli karnaa naqshadeeyayaal aad u xiiso badan sida Sawirka meeleynta Elena Corchero. Naqshadeeyahaan wuxuu adeegsadaa nidaamyo wax soo saar casri ah si loo abuuro badeecado casri ah.
La been abuur dijitaal ah wuxuu ina tusayaa a mustaqbal dhow halkaas oo tiknoolajiyadda, naqshadeynta iyo hal-abuurnimadu ay isla socdaan, iyaga oo maareeya inay adduunka u soo bandhigaan noocyo kala duwan oo fursado cusub oo wax soo saar ah ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Soosaarka dhijitaalka ah iyo teknoolojiyada cusub si loo naqshadeeyo alaabada